Falanqayn: Dad lagu dilay Yemen oo Sacuudigu ku khaldamay - BBC Somali
Falanqayn: Dad lagu dilay Yemen oo Sacuudigu ku khaldamay
Baaritaan ay Sacuudigu sameeyeen oo la xiriira duqayn loo geystay dad meyd aasayey dalka yemen ayaa lagu sheegay in Sacuudiga isbahaysigiisa ay weerarka qaadeen, kaasoo salka ku hayey xog khaldan.
Kooxda baaritaanka samaysay ayaa sheegaya in warbixin khaldan ay soo gudbiyeen saraakiil Yemeniyiin ah oo sheegay inay goobta ku kulansanaayeen hogaamiyeyaasha kooxda hubaysan ee xuutiyiinta, waxayna dalbadeen in talaabo degdeg ah laga qaado.
Baarayaashu waxay kaloo sheegeen in weerarka la qaaday ayadoo aan amar kama dambays ah la helin. Haddaba arrintan ma keeni kartaa in laga aamin baxo saraakiisha Yemeniyiinta? Su'aashaas iyo qaar kale ayaan hor dhignay Dr Xasan Al Basri oo cilmi baare ka ah jaamacad ku taalla Yemen oo la yiraahdo Axqaaf, kana faallooda arrimaha islaamka.
Maqal Furintaanka marinka u dhexeeya Qaza iyo Masar, muxuu uga dhiganyahay dadka deggan Qaza?
Furintaanka marinka u dhexeeya Qaza iyo Masar, muxuu uga dhiganyahay dadka deggan Qaza?
Maqal Muxuu ka dhiganyahay sharci ahaan go'ankii golaha shacabka ee dhibistii Qalbi Dhagax?
Muxuu ka dhiganyahay sharci ahaan go'ankii golaha shacabka ee dhibistii Qalbi Dhagax?
Maqal Qaar ka mid ah hogaamiyayasha waqooyi bari Kenya oo ku dadaalayaa sidii arddada ay u heli lahayeen deeq waxbarasho
Qaar ka mid ah hogaamiyayasha waqooyi bari Kenya oo ku dadaalayaa sidii arddada ay u heli lahayeen deeq waxbarasho
Maqal Gudiga doorashada Soomaaliland oo ka jawaabay eedaymaha uu xisbiga waddani u soo jeediyay
Maqal Sidee ayay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya u arkaan duulaanka ka dhanka ah Al-shabaab?
Sidee ayay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya u arkaan duulaanka ka dhanka ah Al-shabaab?